Harry Styles "Love on Tour" Finale Yakasangana neHuge Demand
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Harry Styles "Rudo paKushanya" Finale Yakasangana neHuge Demand
Harry Styles "Rudo paKushanya" Finale Yakasangana neHuge Demand
GRAMMY Mubairo®-anohwina mukuru wepasi rose Harry Styles achave muimbi wekutanga wemumhanzi pakuvhurwa kukuru kweUBS Arena kuBelmont Park, NY, neSvondo, Mbudzi 28 sekupera kwe2021 Love On Tour. Matikiti achatengeswa kutanga Chishanu, Mbudzi 5 na12 Noon paTicketmaster.com.
Nekuda kwekuda kukuru uye kuona kuti vateveri vanowana matikiti zvakananga, kunyoreswa kwekutanga kweshoo iyi kuUBS Arena, pamuganhu weQueens neNassau County, kunowanikwa kuburikidza neTicketmaster's Verified Fan chirongwa izvozvi kusvika Chipiri, Mbudzi 2 na12 Noon. Verified Fan presale ichaitika neChina, Mbudzi 4 na12 Noon neGeneral Public iri kutengeswa kutanga Chishanu, Mbudzi 5 na12 Noon. Mamwe mashoko anowanikwa pa https://hstyles.co.uk/tour.
American Express Card Nhengo dzichawana mukana wekutenga matikiti eSvondo, Mbudzi 28 show. Iyo Amex Presale inomhanya neChina, Mbudzi 4 na12 Noon kusvika 10 pm ET pamberi peruzhinji. Kucherekedza kupera kwerwendo rwepasirese rwaHarry, American Express inofara kudzosa "American Express X Harry Styles Love Bus" - iyo Fine Line-yakafemerwa, 70's style yakashongedzwa bhazi rakavhurwa pakutanga kwerwendo rwunoda makore maviri. kare muLos Angeles.
PaUBS Arena, Nhengo dzeKadhi dzinokwanisa kupinda nekukurumidza uye dzinogona kutenga chikamu chega cheHarry Styles chekutengesa kubva kunzvimbo dzese dzekutengesa munhandare.
American Express nguva pfupi yadarika yakazivisa mamwe akawanda mabhenefiti mukudyidzana kwakasiyana siyana kwevaraidzo kunosanganisira kuwana gomba kune dzakasarudzwa kushanya, Kadhi Nhengo-chete mitambo, mapindiro ekutaura uye nzvimbo dzekutandarira munzvimbo dzevadyidzani, uye zvekutengesa zvega, zvichiita kuti zviitiko zvevaraidzo zvive nani #withAMEX. Kubva pakutengesa kusvika pakuunzwa kwetekinoroji inopfekwa yekubhadhara kusimudzira ruzivo rwemutambo wemimhanzi, American Express yakazvipira kuchengetedza Nhengo dzeKadhi dzakabatana nenyika yevaraidzo kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu.
Kuvhura Mbudzi 20, 2021, UBS Arena kuBelmont Park inogadzirirwa mimhanzi uye yakavakirwa hockey. Nzvimbo itsva yeNew York yevaraidzo nemitambo uye imba yeNew York Islanders inogadzirwa mukubatana neOak View Group, New York Islanders, naJeff Wilpon. Kupa kusimudzira kwakakosha kuhupfumi hwedunhu, kunyanya kana chiitiko chehupfumi chakanganiswa zvakanyanya nedenda, nzvimbo yepasirese yevaraidzo, ine dhizaini isingane nguva uye yemhando yepamusoro, ichavharisa zvakapfuura nehunyanzvi hwanhasi hwepamusoro uye zvinowanikwapo.
Iyo $ 1.1 bhiriyoni yakawanda-chinangwa, mamiriro eiyo nhandare ichaita zvinopfuura 150 zviitiko zvikuru pagore apo ichipa isingaenzaniswi yehupenyu yekuvaraidza chiitiko zvinosanganisira yakajeka kuona uye premier acoustics. UBS Arena yakagadzirirwa kuchengeta vanhu vanosvika zviuru gumi nezvipfumbamwe zvemakonzati uye vateereri vanosvika zviuru gumi nezvinomwe zvemitambo yeNHL. Mukuedza kuvaka remangwana rakasvibira, UBS Arena inotarisira kuve isina kwayakarerekera kabhoni yekushanda pamberi pa19,000, izvo zvichaita kuti ive nhandare yekutanga kuita izvi kumabvazuva kweUnited States gungwa.
Iri panzvimbo ine nhoroondo yeBelmont Park, UBS Arena iri pasi pemamaira gumi nemashanu kubva kune ese JFK neLaGuardia Airports, uye inosvikika kuburikidza nemotokari uye kukwira mugove pakubuda 15A, 26B, uye 26D kubva paCross Island Parkway. Kune vashanyi vanoshandisa Long Island Rail Road, UBS Arena ichasvikika kuEast and Westbound vafambi paQueens Village LIRR station, Eastbound vafambi paElmont Station nyowani (inosvikwa Westbound muFall 26), uye kuburikidza neBelmont Spur chiteshi, inoshanda kubva kuJamaica pamazuva echiitiko chete. Pamusoro peLong Island Rail Road, nhandare zvakare inowanikwa kuburikidza neMTA Bhazi Routes Q2022 uye Q2 uye Nassau County Inter-Express N110 bhazi sevhisi.
Kune hutano nekuchengetedzeka kwemunhu wese paHarry Styles 'inouya yeRudo On Tour show, vane matikiti vanofanirwa kupa humbowo hwekudzivirira kweCCIDID-19 kana bvunzo isina kunaka mukati memaawa makumi mana nemasere echiitiko, pamusoro pekupfeka mask. Vana vari pasi pemakore gumi nemaviri vanogona kuenda kukonsati kana vakapa humbowo hweiyo COVID-48 bvunzo yakatorwa mukati memaawa makumi mana nemasere ekuratidzira.
Pamusoro pezvo, vese vashandi venzvimbo pashoo yega yega vachange vachiteverawo maprotocol uye vachada kupa humbowo hwekudzivirira kuzere kweCCIDID-19 kana mhinduro isina kunaka mukati memaawa makumi mana nemasere, pamwe nekupfeka mask nguva dzese. Kuda masiki uye kuyedzwa, kana humbowo hwekudzivirira, ndiyo nzira yakanakisa yekudzivirira hutano nekuchengetedzeka kwevashandi vedu uye mafani uye iri kukurumidza kuita chiyero chitsva chekonzati dzakatenderedza US. Panenge pasisina anosiya mitemo iyi. Fans vanokurudzirwa kushanyira webhusaiti yeUBS Arena kuti uwane rumwe ruzivo.